RFP360: Teknolojia mipoitra hialana amin'ny fanaintainan'ny RFP | Martech Zone
Nandany ny asako manontolo tamin'ny varotra rindrambaiko sy ny marketing. Niezaka mafy aho nitondra lohany mafana, hanafainganana ny tsingerin'ny varotra ary handresy fifanarahana - midika izany fa nandany vola an-jatony nandritra ny fiainako aho nieritreritra momba izany, miasa ary mamaly ireo RFP - faharatsiana ilaina raha resaka fandresena vaovao. .
Ny RFP dia nahatsapa ho toy ny fanenjehana taratasy tsy misy farany - dingana miadana tsy azo ihodivirana izay mitaky fihazana valiny avy amin'ny fitantanana ny vokatra, fifandonana amin'ny lalàna, famahana olana amin'ny IT, ary fanamafisana isa miaraka amin'ny fitantanam-bola. Ireo izay mahazatra dia mahalala - mitohy ny lisitra. Ny matihanina amin'ny varotra, varotra ary fampandrosoana ny orinasa dia mandany ora tsy voatanisa mandritra ny ora maro manivana amin'ny valiny teo aloha momba ny fanontaniana miverimberina, manenjika ny valin'ny fanontaniana vaovao, manamarina ny vaovao ary mitady hatrany ny fankatoavana. Sarotra ny fizotrany, mandany fotoana ary manelingelina ny loharanon-karena rehetra.
Na eo aza ny fivoaran'ny teknolojia haingana, ho an'ny orinasa maro, ny fizotran'ny RFP dia niova kely tamin'ny zavatra niainako tamin'ny fiandohan'ny asako mihoatra ny folo taona lasa izay. Ny ekipa mpivarotra dia mbola mampiasa fizotran'ny tanana hanangonana tolo-kevitra, amin'ny fampiasana valiny nalaina avy tamin'ny loharanom-pahalalana mety hipetraka ao anaty takelaka Excel, fizarana dokam-barotra Google ary koa arisiva mailaka.
Izany dia nilaza fa tsy ny faniriantsika mafy ny fizotry ny RFP dia mahomby kokoa, manomboka mitaky azy io ny indostria, izay misy ny rindrambaiko vao misondrotra izay misy akony lehibe eo amin'ny tontolon'ny RFP.
Tombontsoa azo amin'ny lozisialy RFP
Ankoatry ny fanaovana ny fananganana RFP tsy dia maharary; ny fametrahana dingana haingana sy azo averina ho an'ny RFP dia mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny vola miditra. Io no ialan'ny teknolojia RFP vao misondrotra.
Ny rindrambaiko RFP dia manasongadina sy mandahatra ireo fanontaniana sy valiny mahazatra ao amin'ny tranomboky atiny. Ny ankabeazan'ireo vahaolana ireo dia mifototra amin'ny rahona ary manohana ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy eo anelanelan'ny mpitantana ny tolo-kevitra, ny manampahaizana manokana momba ny lohahevitra ary ireo eken'ny fahefana mpanatanteraka.
Manokana, RFP360 ahafahan'ny mpampiasa miasa haingana:
Tehirizo, tadiavo ary ampiasao indray ny atiny amin'ny Fototra fahalalana
Miaraha miasa amin'ny mpiara-miasa aminao amin'ny endriny mitovy amin'ny antontan-taratasy tokana
Manendre fanontaniana, manara-maso ny fandrosoana ary manaova fampahatsiahivana
Ataovy mandeha automatique ny valiny amin'ny AI izay mamaritra ny fanontaniana ary mifantina ny valiny marina
Midira amin'ny Base fahalalana sy miasa amin'ny tolo-kevitra amin'ny Word, Excel ary Chrome miaraka amin'ny plug-ins.
Vokatr'izany, mpampiasa a RFP360Ny vahaolana amin'ny fitantanana ny tolo-kevitra dia nitatitra fa afaka nanapaka tanteraka ny fotoana valiny izy ireo, nampitombo ny isan'ny RFP azon'izy ireo tanterahina, ary miaraka amin'izay koa, manatsara ny tahan'ny fandresen'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Namaly RFP 85 isan-jato mahery izahay tamin'ity taona ity noho ny tamin'ny taon-dasa, ary nampitomboinay 9 isan-jato ny taham-pandrosoana.
Erica Clausen-Lee, tompon'andraikitra ambony amin'ny paikady miaraka amin'ny InfoMart
Miaraka amin'ny valiny haingana, dia hanana fotoana bebe kokoa ianao handefasana valiny tsy miova, marina ary mahomby izay mety handresy ny orinasa.
Ampitomboy ny fihazonana RFP
Amin'ny fampiasana ny Ivotoerana fahalalana ny lampihazo, ny mpampiasa dia afaka mitahiry, mandamina, mikaroka ary mampiasa indray ny atiny natolotra taloha ka manome lohany amin'ny valin'ny RFP. Ny foibe afovoany ho an'ny atin'ny tolo-kevitra dia manakana ny ekipanao tsy hanoratra ny valiny efa misy, ahafahanao manangona angona sy mitazona ny valiny tsara indrindra hampiasana amin'ny ho avy.
Manana fiarovana isika amin'ny fahalalana ny fahalalantsika azo antoka sy tsy miova. Tsy mila miahiahy isika fa ho very ny fahaizan'ny SME raha misy miala na miala sasatra. Izahay dia tsy mandany ora mihaza ny valiny teo aloha ary manandrana mamantatra hoe iza no manao inona satria ny fanontaniana sy valiny rehetra dia eo amin'ny RFP360.
Beverly Blakely Jones avy amin'ny National Geographic Learning | Fandinihana tranga any Cengage
Hatsarao ny fahamarinan'ny RFP
Ny valiny tsy marina na lany andro dia mety ho sarotra tratrarina, na dia ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa efa za-draharaha indrindra aza. Rehefa ampiarahina amin'ny fe-potoana famerenana haingana eo amin'ny RFP, dia mety hiteraka loharanom-baovao diso. Mampalahelo fa ny fampahalalana tsy marina ihany koa dia mety ho lafo tokoa amin'ny fandaniany ny orinasa tadiavinao harahina. Ny valiny RFP tsy marina dia mety hitarika amin'ny fanilihana avy amin'ny fiheverana, fifampiraharahana lava, fanemorana ny fifanarahana na ratsy kokoa.
Ny rindrambaiko RFP miorina amin'ny rahona dia miatrika an'io olana io amin'ny alàlan'ny famelana ireo ekipa hanavao ny valintenin'izy ireo na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fahatokiana ny hahalala ny fanovana dia hita taratra amin'ny rafitra lehibe.
Ohatra, ity karazana fiasa ity dia fitaovana lehibe hananana rehefa misy ny fanavaozana ny vokatra na ny serivisy izay tokony ampidirina anaty valiny mahazatra. Amin'ny tranga maro, miatrika an'io karazana fanovana io, ny ekipa dia tsy maintsy mihazakazaka amin'ny tabilao fandaminana iray manontolo mba hahazoana antoka fa raisina amin'ny andrim-panjakana ny fanavaozana ary avy eo hanaraha-maso ny mpikambana tsirairay mba hahazoana antoka fa natao tamin'ny ambaratonga tsirairay izany ary koa nanamarina indroa ny tolo-kevitra tsirairay alohan'izy ireo mivoaka. Mandreraka.
Ny rindrambaiko RFP mifototra amin'ny rahona dia mitantana ireo fanovana ireo ho an'ny orinasa iray manontolo ary miasa ho trano fanadiovana tokana ho an'ny atiny mivoatra.
Hatsarao ny fahombiazan'ny RFP
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny lozisialy RFP dia ny fanatsarana haingana ny fahombiazany - amin'ny fombany manokana, ny fotoana ilana fananganana RFP amin'ny fampiasana an'io karazana teknolojia io dia mitovy amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitaterana ny morontsiraka sy ny manidina. Vahaolana rindrambaiko RFP maro, ao anatin'izany ny RFP360, no miorina amin'ny rahona ihany koa, izay mamela ny fametrahana haingana, midika izany fa saika eo noho eo ny valiny.
Ny fotoana lanja (TtV) dia ny fiheverana fa misy famantaranandro iray manara-maso ny faharetan'ny mpanjifa amin'ny fifanarahana vita sonia ka hatramin'ny 'ah-ha fotoana' rehefa azon'izy ireo tsara ny sanda ary manokatra ny mety ho lozisialy. Ho an'ny rindrambaiko RFP, matetika io fotoana io dia mitranga herinandro vitsivitsy aorian'ny nanaovana sonia ny fifanarahana rehefa miasa miaraka amin'ny ekipa traikefa ho an'ny mpanjifa amin'ny RFP voalohany ny mpampiasa. Ny valiny mahazatra sy ny tolo-kevitra voalohany dia ampakarina ao amin'ny rafitra, avy eo ny fotoana ah-ha - eken'ny rindrambaiko ny fanontaniana ary ampidiriny ny valiny marina, feno eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 70 isan-jaton'ny RFP ao anatin'ny fotoana fohy.
Hitanay fa ny interface RFP360 no mora indrindra sy mora tohina ary mandeha. Nisy fihenam-pianarana faran'izay kely dia kely ho anay, ary namela ny fiaketanay hitombo teo no ho eo.
Emily Tippins, Administratera fivarotana fivarotana Swish | Fandalinana tranga
Ny fivoaran'ny fizotry ny RFP dia manome fotoana ny mpampiasa hiverina hifantoka amin'ny hetsika ambaratonga ambony sy stratejika.
Azo antoka fa nahatonga antsika hahomby kokoa io. RFP360 dia namerina anay ny fotoanantsika ary namela anay haka sy hisafidy ireo tetikasanay. Tsy mikorontana intsony izahay. Afaka miaina fofonaina lalina isika, mifantoka amin'ny paikady ary alao antoka fa misafidy ireo tetikasa mety sy manome valiny kalitao isika.
Brandon Fyffe, mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana any CareHere
Orinasa mihoatra ny RFP - Ny lozisialy valiny dia tsy natao ho an'ny RFP fotsiny, fa azonao atao koa ny mitantana ny fangatahana fampahalalana (RFI), ny fiarovana ary ny fangatahana fangatahana fahazotoana (DDQs), ny fangatahana mari-pahaizana (RFQ) sy maro hafa. Ny teknolojia dia azo ampiasaina amin'ny karazana fanontaniana sy valiny voalamina miaraka amin'ny valiny miverimberina.
Fampiasana sy fanohanana tsara indrindra - Tsy izay miasa amin'ny RFP dia mpampiasa be. Ny RFP dia mitaky fidirana avy amin'ny sampana sy manam-pahaizana momba ny lohahevitra marobe izay manana fahaizana teknika samihafa. Misafidiana vahaolana mora ampiasaina sy intuitive miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa tena tsara.
Fanandramana sy fitoniana - Toy ny mpamatsy teknolojia SaaS rehetra, azonao atao ny manantena fanavaozana sy fanatsarana tsy tapaka avy amin'ny teknolojia RFP anao, saingy alao antoka fa manana ny traikefa ny orinasa handefasana endri-javatra tena ilaina izay azonao ianteherana.
Knowledge Base - Ny vahaolana RFP rehetra dia tokony ahitana ivon-toerana azo tadiavina izay ahafahan'ny mpampiasa anao miara-miasa mora foana ary manome fanavaozana ny valiny nomena azy ireo. Mitadiava vahaolana izay mampiasa AI mba hifanaraka amin'ny fanontaniana mahazatra amin'ny valintenin'izy ireo.
Plug-in manan-tsaina sy fampidirana - Ny teknolojia RFP dia tokony hiasa amin'ireo programa ampiasainao. Mitadiava plug-ins izay mamela anao hampiasa ny fahalalanao eo am-piasana amin'ny valinteninao amin'ny programa toa ny Word na Excel. Ny rindrambaiko dia tokony hampidirina amin'ny CRM manan-danja sy ny fampiharana famokarana mba hanohanana tsara ny fizotran'ny RFP misy anao.
Mandany fotoana kely kokoa ary mahazoa RFP bebe kokoa
Ny RFP dia momba ny fandresena. Natao izy ireo hanampiana ny mpividy hanapa-kevitra hoe iza no tsara indrindra, ary vao haingana ianao dia manaporofo fa mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna ny orinasanao, vao mainka tsara kokoa. Ny rindrambaiko RFP dia manafaingana ny fizotranao hahalasa anao haingana kokoa, hanidy orinasa bebe kokoa ary hanome anao fotoana bebe kokoa handresena.
Rehefa nanjary nifanaraka kokoa sy niara-niasa tamin'ny ekipa fidiram-bola ny ekipa marketing, nanjary manan-danja kokoa amin'ny fizotrany ny teknolojia RFP. Ny fangatahana valinteny RFP haingana dia tsy hiala. Aza miandrasa mandra-pahatonganao tsy handray azy intsony handraisanao teknolojia mamonjy fotoana anao amin'ny RFP anao. Azo antoka fa tsy hanao izany ireo mpifaninana aminao.
Mangataha Demo RFP360
Tags: fangatahana fangatahanaRFPsehatra RFPrfp360fikolokoloana swishfotoana hanomezana lanjattv
Beau Wysong dia Lehiben'ny Marketing ao amin'ny RFP360. Mampiasà ny fiaviany marobe amin'ny marketing teknolojia sy ny varotra izy hitarika ny fitomboan'ny orinasa ho an'ny orinasan-rindrambaiko. Beau dia tompon'andraikitra amin'ny fananganana marika mitarika tsena, fampidirana mpanjifa ary fanabeazana fahalalana ho an'ny mpanjifa ho avy.